Thursday,2July 2009 - Posted by Shwe Thiri Khit
ငယ်ငယ်တုန်းက ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတခုလေ... မေနဲ့ ငယ်ငယ်ကအကြောင်းတွေပြောရင်း သတိတရရှိသွားလို့ မြင်ကွင်းလေးတခုကို artwork အနေနဲ့ ဖန်တီးမိတယ်။
အမေက ထမင်းခွံ့ကျွေးရင်း ငါးရိုးဆူးသွားလို့ မကြည်မလင်ဖြစ်သွားတဲ့ ပုံရိပ်လေးတခုသတိရမိသွားလို့ပါ။ ငါးရိုးကျသွားအောင် အမျိုးမျိုးအကြံထုတ်ကာ.. ကလေးတယောက်၏ကြိုးစားမှု... မေက ကျမရဲ့ ဆူပုပ်နေတဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ရင်း ရယ်ကျဲကျဲလုပ်နေခဲ့တယ်။ ကစားမက်တဲ့ ကျမအတွက် မေက.. ရေဗူးလေးတလုံးအမြဲဆောင်စေခဲ့တယ်။ သဲပုံနဲ့အုတ်နီခဲပုံပေါ်တွေမှာ ဆော့ခဲ့တဲ့ ကျမဆံပင်တွေ နီကြောင်ကြောင်ဖုန်အလိမ်းလိမ်း တွေနဲ့ပေါ့... ခြံထဲကို လာလာလည်တတ်တဲ့ ကြောင်နက်တကောင်နဲ့လည်း သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်... သူ့ကို ကျမ အကြိုက်ကာတွန်းဖြစ်တဲ့ KiKi Delivery Service ထဲက ကြောင်နက်လေးအဖြစ် KiKi ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပေးခဲ့တယ်..
This isapicture of me when I was young having trouble with fish bones and havingaspouting face at my mother who was funny. She even recalled that it was her favourite scene. Also asaplayful young girl I always haveawater bottle in my pocket with me. Moreover if you are wondering about the red hair, it’s because I was playing above piles of brick and heaps of sand. The black cat was not my pet; he’s my friend who frequented my garden at that time. ^_^